Shiinaha BONOVO Dhexdhexaad Digger xcavator mashiinka dhaqaajiya Dunida ee qodida warshada iyo alaabada | Bonovo
Guud ahaan Halbeegyada
140 / 2050r / daqiiqo
Qoto Dheer Max
Xawaare la qiimeeyay
5.4 / 3.1 km / saacaddii
Max dhererka dhererka
Max Raadius Raadinta
Astaan ​​asal ah DOOSAN
Brand Shantui asalka ah
Xoog baaldi qodaya
• Karti Sare •Ilaalinta Tamarta • Deegaanka Deegaanka
QSB7 Engine, China Stage III & Euro III Qiiqa Qiiqa oo u hogaansan. Awood Badan, Waara, Isticmaalka Shidaalka Yar, Aaminaad Sare iyo Karti.
Barakac Balaaran & Nidaam Haydaroolin Karti Badan
Barakac ballaaran iyo mashiinka wax-ku-oolnimada sarreeya, soo-kicinta qulqulka / usha socodka, gawaarida dhaqsaha badan u dhaqaaqa, iyadoo la adeegsanayo mashiinka la isku qurxiyo iyo mashiinka isku dheelitiran, ugu badnaan. ka faa'iideysiga awoodda mashiinka si aad ugu fiicnaato waxqabadka shaqada.
Sawirada Qaab dhismeedka
Sidee looga ilaaliyaa qodistaada waxyeellada aan habboonayn?
Qodistaada waa maalgashi weyn. Marka ilaali sida ay tahay. Hubso in qoddaada ay leedahay nooc ka mid ah farsamada ladagaalanka tuugada ama farsamada. Waxa ugu dambeeya ee aad dooneysaa waa inaad si lama filaan ah u ahaato la'aan qalab aad si joogto ah ugu tiirsanaato. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo ku saabsan sida looga fogaado waxyeellada.
Helitaanka Qaybaha iyo Lifaaqa
Mararka qaarkood lahaanshahaaga, waxaad u baahan kartaa inaad iibsato qaybo beddelaad ah. Sababtaas awgeed, waxaa muhiim ah in la hubiyo inaad si fudud ku heli karto qaybaha mashiinkaaga ka kooban.
Markaad dooratid qodista aad jeceshahay, hareerahaaga eeg si aad u aragto haddii qaybo beddel ah laga iibsan karo aaggaaga. In kasta oo aysan ahayn in laga helo deegaan ahaan, in agtooda laga ag dhowaado waxay kaa caawin doontaa inaad dhibaatooyinka si dhakhso leh u xalliso. Haddii kale, waa inaad sugto inta qaybo kuu soo rarayso.
Hubso in lifaaqyada la heli karo meel u dhow sidoo kale. Habkaas, markaad u baahatid iyaga, waxay noqon doonaan kuwo si fudud loo heli karo. Hubi si aad u ogaato haddii ay jiraan ikhtiyaarro kiro, sidoo kale, haddii aad u isticmaali doontid lifaaqyada qaarkood mararka qaarkood.
Warshad ku lifaaqan BONOVO waxay ku siin karaan waxyaabo badan oo lifaaqyo ah oo loogu talagalay qashin qubka, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad sheegto dhammaan noocyada xaaladaha shaqo ee suurtagalka ah ee aad la kulmi karto, iibkeennu wuxuu ku siin doonaa xal iibsi hal-joogsi ah isla markiiba.
Warshada Gawaarida Gawaarida ee BONOVO had iyo jeer waa diyaar u ah inay ku siiso qaybo ku habboon dhulka hoostiisa oo loogu talagalay dhammaan mashiinnadaada oo ay ku jiraan qashin qubka, bulldozers, min qodayaasha, gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida iyo iwm.
Hore: Qodista Amphibious
Xiga: Qodista Yar 1 Ton - ME10
Qodis yaryar oo ah 0.8 tan
11 Ton Qodista
20 ton oo wax qoday
20 ton qodis
20 tan oo dhul qod ah
21 ton qodis
Qod 25 ton ah
Qodista 33 ton oo dhulgariir ah
6 Ton Qodista
Qodista dhexdhexaadka bisadda
guurguuraha + qodista
ÉQasabadaha de dhismaha
scavatore scavator e
qodista 2 tan
qodista 20 tan
qodista 3 dhibic
qodista dhulka mareykanka
godad xoog badan 1:14
qodista oruga 20 tan
soosaarayaasha dharka escavadeira nova 20 tan
hitachi 20 ton qodista
hunia 1593 qodid
qotada qodayaasha kubota kx 61
qotada qodayaasha kubota kx 61-2x
Qashin qodista mashiinka mashiinada 390 diir
qodista dhexdhexaadka ah ee iibka
qodista cabbirka dhexdhexaadka ah
qodista taayirada 16 / 70-24 huachi
qodista taayirada 16 / 70-24 huachi gost 24779-81